Ozi banyere Apple na-agbasi mbọ ike na nyocha ọrụ ya bụ akụkọ na-atọ ụtọ n’uche m. M na-enwe olileanya mgbe niile na Microsoft nwere ike ịsọ mpi na Google… ma nwee nkụda mmụọ na Bing enwetaghị nnukwu mpi ihu. Site na ngwaike nke onwe ha na ihe nchọgharị agbakwunyere, ị ga-eche na ha nwere ike ijide òkè karịa ahịa. Amaghị m ihe kpatara na ha enweghị ma Google na-achịkwa ahịa ahụ na 92.27% ahịa ahịa… na Bing nwere naanị 2.83%.
Na-akwalite Podcast iTunes gị site na Smart Banner Smart
Ọ bụrụ na ị gụọla akwụkwọ m maka ogologo oge ọ bụla, ị mara na m bụ nwa Apple. Ọ bụ atụmatụ dị mfe dịka m ga-akọwa ebe a na-eme m ka m nwee ekele maka ngwaahịa na atụmatụ ha. Eleghị anya ị chọpụtala na mgbe ị mepere saịtị na Safari na iOS na azụmaahịa na-akwalite ngwa ekwentị ha na Smart App Banner. Pịa na ọkọlọtọ, na ị na-ẹka na App Store ebe ị nwere ike ibudata
Nchọgharị Ntanetị Nke Bu Nchọgharị Na-elele Email
Fraịde, Machị 8, 2013 Douglas Karr
Ndị folks na Litmus wepụtara infographic a, Internet Explorer N'agbanyeghị nhọrọ kachasị maka Email ịntanetị. Echere m na nke ahụ na-abịara ndị anyị na ụlọ ọrụ ntanetị oge niile - ndị na-atụgharị anya na Chrome na Safari, mana anyị anaghị eleghara ndị ahịa anyị anya na ụlọ ọrụ ha nọ na ya. na-enweghị oke nhọrọ. Email na ndị ọrụ weebụ n'ụwa niile nwere ohere ịnweta ọzọ
Saturday, April 28, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’itinyela saịtị n’obere nchọgharị na kọmputa na mbadamba, ọ nwere ike ịbụ nrụgide ma na-eri oge. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ echepụtala ngwaọrụ iji gosipụta nsụgharị na ngwaọrụ ndị a, mana ọ bụchaghị otu ule na ngwaọrụ ahụ. M na-agụ akwụkwọ akụkọ Web Designer taa wee chọpụta na Adobe bidoro Onyunyo, ihe eji enyere ndị na-emepụta aka aka ma rụọ ọrụ na ngwaọrụ ahụ n'oge. Na ileba anya mbụ,